File size 2GB အထိ Email ကနေ အခမဲ့ပို့ပေးနိုင်တဲ့ WeTransfer
13 Mar 2018 . 6:32 PM
Gmail ကနေ File တစ်ခုခုကို Attach လုပ်ပြီး ပေးပို့မယ်ဆိုရင် 25 MB အထိပဲပေးပို့နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ File Size ပိုကြီးတဲ့ File တစ်ခုကို ပို့မယ်ဆိုရင်တော့ Send Space လို Service တစ်ခုခုကို အသုံးပြုပြီးပဲ ပို့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Send Space က Free User အနေနဲ့ 300 MB အထိပဲကန့်သတ်ထားတဲ့အတွက် အဲ့ဒီထက်ပိုများတဲ့ File တစ်ခုခုကိုပို့ချင်ရင် Cloud Storage တစ်ခုခုကနေတစ်ဆင့် Share Link ထုတ်ပေးတာပဲရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် WeTransfer ကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ File Size 2GB အထိ ပေးပို့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
WeTransfer ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုရင် ပုံမှန် Web Browser ကနေ www.wetransfer.com ကို ဝင်ရောက်လိုက်တာနဲ့ ရှင်းလင်းတဲ့ Interface ကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပြီး Default အနေနဲ့ အရင်ဆုံး ကိုယ်ပေးပို့ချင်တဲ့ Email, ကိုယ့်ရဲ့ Email နဲ့ အခြားပြောချင်တဲ့ Message ကို ရေးသားနိုင်ပြီး Add your files ကနေ နှစ်သက်ရာ File ကို ရွေးချယ်ပြီး Transfer နှိပ်လိုက်တာနဲ့ ပေးပို့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ Email တစ်ခုမက ပေးပို့ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း WeTransfer ကနေ Email အခု ၂၀ အထိတစ်ပြိုင်နက်ထဲအခမဲ့ပေးပို့နိုင်ဦးမှာပါ။
Email အနေနဲ့ ပေးပို့တာမျိုးမဟုတ်ပဲ Download Link အနေနဲ့ပဲ ပေးချင်တယ်ဆိုရင်လည်း Transfer ဘေးက အစက်သုံးစက်ကို နှိပ်ပြီး Send as link အနေနဲ့ပဲ Download Link ကိုထုတ်ပေးလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခြား Features တွေဖြစ်တဲ့ ဘယ်အချိန်ကြာပြီးရင် ပြန်ဖျက်မယ်ဆိုတာနဲ့ Password ထားဖို့အတွက်ကတော့ လစဉ် (သို့) နှစ်စဉ်ကြေးနဲ့ ဝယ်ယူရမယ့် WeTransfer Plus နဲ့ပဲ အသုံးပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Mobile Application ကနေ အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်လည်း WeTransfer က Android မှာရော၊ Apple iOS မှာပါ Download ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Mobile Application ကနေ အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ခုရှိတာက ဝင်ရောက်ပြီး File တွေပေးပို့တဲ့နေရာမှာ ဓါတ်ပုံနဲ့ ဗီဒီယိုတွေကိုပဲ တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပြီး တကယ်လို့ အခြား File တွေကို ပေးပို့ချင်တယ်ဆိုရင် File Explorer ထဲက ဝင်ပြီး Share ကနေ WeTransfer ကို ရွေးချယ်ပေးမှရပါလိမ့်မယ်။
WeTransfer မှာ Premium အနေနဲ့ WeTransfer Plus ဆိုပြီး တစ်လကို $12 (သို့) တစ်နှစ်ကို $120 နဲ့ ဝယ်ယူနိုင်ပြီး Plus Version မှာတော့ 20GB အထိ ပေးပို့နိုင်တဲ့အပြင် 100GB Storage ရရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ်ပေးပို့ထားတဲ့ File တွေကိုပါ သိမ်းထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အခုနပြောခဲ့တဲ့ Password သတ်မှတ်နိုင်တာ၊ Profile ကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်တာတွေကို ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
WeTransfer ကို ယေဘုယျသုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင် လက်ရှိ Email တစ်ခုခုကို File Attachment ပေးပို့မယ်ဆိုရင် Send Space ထက်ပိုပြီး ကောင်းတယ်လို့ ပြောလို့ရပြီး Features တွေအများအပြားမပါဝင်ပေမယ့် သုံးရလွယ်ကူတာပြီး ရိုးရှင်းတဲ့အတွက် စမ်းသပ်သုံးစွဲကြည့်သင့်တဲ့ Service တစ်ခုဖြစ်မှာပါ။
Gmail ကနေ File တဈခုခုကို Attach လုပျပွီး ပေးပို့မယျဆိုရငျ 25 MB အထိပဲပေးပို့နိုငျတာဖွဈပါတယျ။ တကယျလို့ File Size ပိုကွီးတဲ့ File တဈခုကို ပို့မယျဆိုရငျတော့ Send Space လို Service တဈခုခုကို အသုံးပွုပွီးပဲ ပို့နရေတာဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ Send Space က Free User အနနေဲ့ 300 MB အထိပဲကနျ့သတျထားတဲ့အတှကျ အဲ့ဒီထကျပိုမြားတဲ့ File တဈခုခုကိုပို့ခငျြရငျ Cloud Storage တဈခုခုကနတေဈဆငျ့ Share Link ထုတျပေးတာပဲရှိတော့မှာဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ WeTransfer ကို အသုံးပွုမယျဆိုရငျတော့ File Size 2GB အထိ ပေးပို့နိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
WeTransfer ကိုဘယျလိုအသုံးပွုရမလဲဆိုရငျ ပုံမှနျ Web Browser ကနေ www.wetransfer.com ကို ဝငျရောကျလိုကျတာနဲ့ ရှငျးလငျးတဲ့ Interface ကိုတှမွေ့ငျရမှာဖွဈပွီး Default အနနေဲ့ အရငျဆုံး ကိုယျပေးပို့ခငျြတဲ့ Email, ကိုယျ့ရဲ့ Email နဲ့ အခွားပွောခငျြတဲ့ Message ကို ရေးသားနိုငျပွီး Add your files ကနေ နှဈသကျရာ File ကို ရှေးခယျြပွီး Transfer နှိပျလိုကျတာနဲ့ ပေးပို့နိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ တကယျလို့ Email တဈခုမက ပေးပို့ခငျြတယျဆိုရငျလညျး WeTransfer ကနေ Email အခု ၂၀ အထိတဈပွိုငျနကျထဲအခမဲ့ပေးပို့နိုငျဦးမှာပါ။
WeTransfer မှာ Premium အနနေဲ့ WeTransfer Plus ဆိုပွီး တဈလကို $12 (သို့) တဈနှဈကို $120 နဲ့ ဝယျယူနိုငျပွီး Plus Version မှာတော့ 20GB အထိ ပေးပို့နိုငျတဲ့အပွငျ 100GB Storage ရရှိမှာဖွဈတဲ့အတှကျ ကိုယျပေးပို့ထားတဲ့ File တှကေိုပါ သိမျးထားနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ နောကျပွီး အခုနပွောခဲ့တဲ့ Password သတျမှတျနိုငျတာ၊ Profile ကို စိတျကွိုကျပွငျဆငျနိုငျတာတှကေို ပွုလုပျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
by PhoneHayKo .2hours ago